UkuCoca uLuhlu lwabaBhalisi bethu kuyonyuse njani i-CTR yethu nge-183.5% | Martech Zone
UkuCoca uLuhlu lwabaBhalisi bethu kuyonyuse njani i-CTR yethu nge-183.5%
NgoLwesine, Aprili 20, 2017 NgoLwesine, Septemba 24, 2020 Douglas Karr
Sasidla ngokubhengeza kwindawo yethu esinayo ngaphezulu kwababhalisi abangama-75,000 Kuluhlu lwethu lwe-imeyile. Ngelixa bekuyinyani oko, besinengxaki yokuhanjiswa kwezinto apho sasibambeke khona kwiifolda zogaxekile. Ngelixa ababhalisile abangama-75,000 babonakala behle xa ufuna abaxhasi be-imeyile, kuyothusa kakhulu xa iingcali ze-imeyile zikwazisa ukuba abayifumani i-imeyile yakho kuba ibibambekile kwifolda ye-junk.
Yindawo engaqhelekanga ukuba lapho kwaye ndiyithiyile. Ungayichazanga eyokuba sineengcali ezimbini ezahlukeneyo ze-imeyile njengabaxhasi- 250ok kwaye Ungaze uyekelele. Ndide ndathatha ezinye Ukubamba ingcali kuGreg Kraios kudliwanondlebe lwamva nje apho andibize khona njengogaxekile.
Eyona nto ibalulekileyo kwingxaki yam yayiyinto yokuba abathengisi bajonge uluhlu olukhulu. Uluhlu lwee-imeyile abaxhasi abahlawuli nge-click-through-rate, bahlawula ngokobungakanani boluhlu. Ngenxa yoko, ndandisazi ukuba xa ndicoca uluhlu lwam, ndiza kuhlamba kwingeniso yentengiso. Kwangelo xesha, ngelixa ukukhuthaza uluhlu olukhulu luya kutsala abathengisi, yayingenguye ukugcina Abathengisi abalindele ukubandakanyeka ngakumbi.
Ukuba ndinqwenela ukuba ngumthengisi olungileyo kunye nomzekelo kubaphulaphuli bam, ibilixesha lokuba sicoce kuthi Incwadana yemihla ngemihla neyeveki uluhlu:
Ndizisusile zonke iidilesi ze-imeyile kuluhlu lwam ebelukoluhlu lwe ingaphezulu konyaka omnye kodwa ayizange ivulwe okanye icofwe kwi-imeyile. Ndikhethe unyaka omnye njengovavanyo kwimeko apho bekukho ixesha elithile apho abantu banokuhlala bebhalisile, kodwa bebelinde ixesha labo lokuba babeke iliso kwincwadana yamanqaku afanelekileyo.
Ndabaleka uluhlu olushiyekileyo ngeNeverbounce ukuya susa iidilesi ze-imeyile ezinengxaki kuluhlu lwam-ukubhuqa, ukulahla, kunye needilesi ze-imeyile zokubamba.
Ukwazi ukuba ndiza kunkqonkqoza ubhaliso lwam lobhaliso phantsi kakhulu kwakoyikisa, kodwa kwaphumela kwiziphumo ezothusayo emva kweeveki ezi-2 zokuthumela iincwadana zethu.
Sisuse ngaphezulu Ababhalisi be-imeyile abangama-43,000 ebesiyifumene kule minyaka ilishumi idlulileyo kwaye ngoku sishiyekile sinama-32,000.
Inqanaba lethu lokubekwa ebhokisini inyuke nge-25.3%! Andizange ndicinge ukuba zingaphi iidilesi ze-imeyile ezifile ezazisirhuqa ezantsi- ndiyavuya ukuba uGreg wandibamba entloko kolo dliwanondlebe.
Kuba ngoku sasikwi-inbox, i Ireyithi evulekileyo inyuke nge-163.2% kunye nathi izinga lokucofa nge-183.5%!
Ngoku, phambi kokuba uthi… kulungile, uDouglas wahlulelene ngokwedinomineyitha entsha yiyo loo nto unyukile. Hayi. Le yayiyi-delta phakathi kwenqanaba lam elidala lokuvula kunye nereyithi entsha evulekileyo, kunye ne-CTR yakudala xa ithelekiswa ne-CTR entsha. Ingxaki yoluhlu lwethu yayikukuba babebaninzi ababhalisile abangasebenziyo kungekho msebenzi.
Siseneengxaki ze-ISPs ezingasibekiyo kwi-Inbox, kodwa yiminyaka elula phambi kwalapho sasikhona! Ngoku sicingisisa ngokwakha umthetho kwinkonzo yethu ye-imeyile ezenzekelayo ngokuzenzekelayo le ndawo icoca ubusuku bonke. Sikwongeze iflegi yokhetho kuludwe lwembewu yethu ukuqinisekisa ukuba azicoceki, kuba azikaze zivule okanye zicofe i-imeyile.
Ukwazisa: 250ok kwaye Ungaze uyekelele Bobabini bangabaxhasi bopapasho lwethu lweMartech.
tags: 250okukuhanjiswaimeyile ctrinqanaba lokuhanjiswa kwe-imeyilemaster zikhuphekucocaukususaUkucocacima
Kutheni iinguqu ezincinci kwi-CPG yokuThengisa ukuThengisa kunokuKhokelela kwiziphumo eziKhulu